Nyamavhuvhu Pride mhemberero dzinotonga muMalta, rakavanzika gem reMediterranean
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Malta Kuputsa Nhau » Nyamavhuvhu Pride mhemberero dzinotonga muMalta, rakavanzika gem reMediterranean
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hospitality Industry • LGBTQ • Malta Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Kuona kweGrand Harbor, Valletta, inzvimbo imwe chete yekushanyira panguva yekupemberera kweMalta Pride
Malta, nzvimbo yezvitsuwa muMediterranean, ndiyo nzvimbo yakakwana yekuenderera mberi nekuzvikudza kupemberera musi waSeptember 10-19, mushure mekupedzisira kweUnited States munaJune. Malta yakaverengerwa # 1 ne ILGA-Europe pane iyo EU Rainbow Chinyorwa chegore rechitanhatu mumutsara uye ndeimwe yenzvimbo dzepamusoro dzeLGBTQ + dzekushanya. Malta yakawana huwandu hwakazara hwe6% yeLGBTQI kodzero dzevanhu.
Malta ndeimwe yepamusoro LGBTQ + yekufambisa nzvimbo.
Vashanyi vanogona kupemberera Malta Pride Vhiki kubva munaGunyana 10-19, 2021, iyo inosanganisira Malta Pride Kurume uye konzati musi waGunyana 18, 2021.
Malta inoronga zviitiko zvakasiyana siyana zvekunakidzwa mukati memhemberero yavo yevhiki-refu vachiona chiitiko chisingakanganwike kune vese LGBTQ + vashanyi.
Malta Pride Vhiki mukana wakanaka wevafambi veLBBTQ + kuti vaongorore zviwi zviwi zvehanzvadzi, Malta, Gozo, neComino vachipemberera vhiki yekuzvitutumadza kunzvimbo yekushanya inozivikanwa makore ayo 7000 enhoroondo, zvekudya zvekudya zvinosanganisira 5 Michelin nyeredzi maresitorendi, mahombekombe makuru uye husiku husiku. Malta inoronga zviitiko zvakasiyana siyana zvekunakidzwa mukati memhemberero yavo yevhiki-refu vachiona chiitiko chisingakanganwike kune vese LGBTQ + vashanyi.
Luzzu, chikepe cheMalta Chekuredza muMarisaxlokk
Malta Pride vhiki ine vhiki izere nezviitiko muzvikamu zvese zvinosanganisira fashoni, hunyanzvi, firimu nemumhanzi.
KUFUNGWA- Visual Arts Exhibition - Gunyana 10
POP naLollipop - Gunyana 11 & 17
Kuzvikudza Mureza chiratidzo chekuratidzira - Gunyana 12
Kuzvikudza Zuva reGungwa - Gunyana 12
LGBTQI Art uye Fashoni Exhibition - Gunyana 12 - 18
Misangano kuMaori - Gunyana 12
Nhaurirano yenharaunda - Gunyana 14- 17
Kuzvikudza Vhura Mic Husiku - Gunyana 15
Mixology Husiku - Gunyana 15
Musangano wekodzero dzevanhu - Gunyana 16
Mwedzi Kubata-kumusoro kuMalta Chokoreti Fekitori - Gunyana 16
Firimu Kuongorora - Gunyana 16
David Bowie manheru emagariro - Gunyana 17
Kuzvikudza Kuungana Kwemagariro - Gunyana 17
#YouAreIncluded Malta Pride konzati - Gunyana 18
The After Party - Gunyana 18
Gwaro rekuongorora: Kuzvikudza kupandukira - Gunyana 19
Vakabatwa nemaAmerican Vanogamuchirwa muMalta - vanofanirwa kushandisa VeriFLY app
Vafambi vanobva kuUS kuenda kuMalta vanozove nemukana wekuona hukama hwavo uye nekupa mamwe magwaro, sezvinodiwa neMalta Health Authorities, kuburikidza neiyo VeriFLY app iyo inobatsira kudzikisira jekiseni re COVID-19, magwaro kusimbiswa, uye kuratidza mhedzisiro yakajeka , tsika inofarira kuverenga. Mushure mekugadzira chimiro chakachengeteka pane yavo nhare mbozha, vafambi vanoisa ruzivo rwejekiseni uye zvimwe zvinyorwa sekudikanwa zvakanangana neVeriFLY app. Iyo VeriFLY app ichaona kuti ruzivo rwevatakuri rwunowirirana nezvinodiwa neMalta uye inoratidza yakapusa kana kutadza meseji. Kutevera izvo, iye mufambi anozotungamirwa kuzadza iyo Passenger Locator Fomu ye kupinda muMalta. Iyo VeriFLY app, inowanika paGoogle Play uye neApple App Store, ichagonesa vashandisi kumisikidza yavo "Rwendo rweMalta" kupfuura, iyo inoputira izvo zvinodiwa kuti upinde muMalta, yakarongedzwa kuva mushandisi-inoshamwaridzika yekutarisa, mushure mekupedza zvese zvinodiwa .
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Pride Vhiki Zviitiko, shanya:
Zvitsuwa zvine zuva reMalta, pakati peGungwa reMediterranean, zvine musha wakasarudzika wenhaka yakavakwa, kusanganisira huwandu hwakanyanya hweUNESCO World Heritage Sites mune chero nyika-nyika chero. Valletta yakavakwa neanodada Knights yeSt.John ndeimwe yezviono zveUNESCO uye European Capital of Culture yegore ra2018.Malta patrimony mumatombo ematombo kubva kune ekare-emahara emadziro ekuvaka matombo pasi, kune imwe yeBritish Empire inotyisa masystem ekudzivirira, uye anosanganisira musanganiswa wakapfuma wemapurani epamba, echitendero neechiuto kubva kunguva dzekare, medieval uye nguva dzekutanga dzazvino. Nemamiriro ekunze ane zuva rakajeka, mahombekombe anoyevedza, hupenyu husiku hunobudirira, uye makore mazana manomwe ezviuru enhoroondo inonakidza, pane zvakawanda zvekuona nekuita. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Malta, shanya www.chandiramani.com.
Kuti uwane mamwe mashoko, shanyira: www.chandiramani.com, https://www.visitmalta.com/en/gay-friendly-malta